juillet 2015 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
« Nofidian’Andriamanitra isika mba hirahiny »
Mitodika amin’ireo Apôstôly aloha ny dingana voalohany amin’ny fampianarana amin’ity Alahady ity.
Nifidy olona hiara hiasa aminy i Jesoa, dia ireo Apôstôly roa ambinifolo lahy. Ny isa 12dia manan-danja ao amin’ny Soratra Masina satria: 12 ny fokon’Israely, ireo no nanorenana ny Eglizy raha ao amin’ny Testamenta taloha no jerena ; ary ao amin’ny Testamenta Vaovao, nanomboka nisian’i Jesoa, dia nifidy mpianatra 12 lahy indray i Jesoa anehoana an’izay Fiangonana vaovao naorin’i Kristy (hitatsika amin’ny alalan’ireo Apôstôly 12 lahy ireo). Ka rehefa nofidiany, dia nantsoiny izy ireo hankeo aminy. Naniraka azy ireo tsiroaroa i Jesoa, fa alohan’ny nanirahany azy dia nozarainy tamin’ireo mpianatra ireo ny fahefany: handroaka demony, hanasitrana ny marary, sns … Ny tenin’i Jesoa dia hoe: tsy mitondra na inona na inona eny ana-dalana na kitapo na mofo na vola, fa tehina no entina ary asiana kapa ny tongotra.
Inona no ilana ny “tehina”? Voalohany, ny mpiandry ondry no mitondra tehina; manaraka izany, ny tehina, rehefa mandeha lalana lavitra, dia afaka itehenana rehefa reraka sy manampy hijoro ; fa ny tehina ihany koa dia ahafahana miaro tena eny an-dalana. Ny hevitry ny hoe “Ny tongotra no asiana kapa” kosa dia : mba tsy hanavesatra satria lavitra ny lalana. Izay no hafatr’i Jesoa tamin’ireo mpianany. (suite…)
Continuer la lecture Alahady 12/07/2015 : Toriteny
Vakiteny voalohany: Bokin’i Amôsy Mpaminany (Amôs 7, 12-15)
Tamin’izany andro izany, hoy i Amasiasa, mpisoron’i Betela, tamin’i Amôsy: “Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin’ny tanin’i Jodà, ka any ianao no mihinàna hanina; any ianao no maminania. Fa aza maminany aty Betela intsony, satria fitoera-masin’ny mpanjaka ny aty, ary tranom-panjakana”. Izao no navalin’i Amôsy an’i Amasiasa: “Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. Ary nalain’ny Tompo tany aorian’ny biby fiompy aho, dia nataon’ny Tompo tamiko hoe: Mandehàna ianao, maminany any amin’’i Israely vahoakako”.
Vakiteny faha-2: Taratasin’i Md. Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Efezy (Efez 1, 3-14)
Hisaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, izay nitso-drano antsika tao amin’i Kristy amin’ny tso-drano rehetra ara-panahy any andanitra, synifidy antsika tao aminy talohan’ny nahariana izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manantsiny eo anatrehany isika, ary nanendry antsika rahateo tamim-pitiavana araka ny sitraky ny fony, mba ho zanaka hatsangany amin’ny alalan’i Jesoa Kristy isika; nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavany izany, dia ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin’Ilay malalany. Izy no ahazoantsika ny fanavotana amin’ny Rany, sy ny famelana ny fahotantsika, araka ny haben’ny fahasoavany, izay nomen’Andriamanitra be dia be ho antsika tamin’ny fahendrena amam-pahalalana rehetra, fa nampahafantariny antsika ny lahatra lalin’ny safidim-pony, izay nofidin’ny hatsaram-pony hotanterahiny, rehefa feno ny andro: dia ny hanakapohana ny zavatra rehetra ho iray ao amin’i Kristy, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany.
Tao aminy ihany koa no nandraisantsika ny lovan-tsika, rahefa voatendry rahateo isika, araka ny fikasan’Ilay manao ny zavatra rehetra manaraka ny hevitry ny fony, mba ho fankalazana ny voninahiny isika, dia isika izay nanantena an’i Kristy rahateo. Tao aminy ianareo no nino, rahefa nahare ny tenin’ny fahamarinana, ny Evanjelin’ny famonjena anareo, ka nasiana ny tombo-kasen’ny Fanahy Masina, izay nampanantenaina sy santatry ny lovantsika, mandra-pahatanteraky ny fanavotana an’izay rehetra nofidin’Andriamanitra ho fankalazana ny voninahiny.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Marka (Mk 6, 7-13)
Nanomboka naniraka azy ireo izy. (suite…)
Continuer la lecture Alahady 12/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra
Na dia osa sy malemy aza isika dia eo i Kristy ho heritsika.
Raha dinihina ireo vakiteny telo nomen’ny Fiangonana antsika anio dia azo adika amin’ny teny Frantsay hoe: “ Spiritualité de l’echec ”, izany hoe: ny toe-panahy hoentina miatrika ny tsy fahombiazana eo amin’ny fiainana satria samy manambara fa Andriamanitra aza, i Jesoa aza, dia toa tsy nahomby rehefa tonga tany amin’ny tany nahabe azy. Nankany Nazareta i Jesoa, ka tao ny havany nanao hoe “Moa tsy aty amintsika va ny rahalahiny, aty amintsika ny anabaviny.” Ka diso hevitra isika indraindray, raisin’ny olona sasany io teny io anoherana fa: i Jesoa Kristy dia tsy zanak’Andriamanitra, i Masina Maria dia mbola niteraka an’i Josefa , Joda sns … Olona tsy mahalala no manao izany. Ny toe-tsaina jody dia toe-tsaina tatsinanana : ny zanaky ny rahalahy, na ny zanaky ny rahavavy, na ny zanaky ny anabavy, na ny zanaky ny anadahy dia toy ny iray tampo amin’ny zanaka ihany. Mitovy amin’izay koa ny teo-tsaintsika Malagasy ; ka raha miteny an’io hoe: “aty amintsika va ny rahalahiny, aty amintsika ny anabaviny” dia zanaky ny mpiray tampo amin’i Masina Maria no tiana ambara fa tsy hoe zanak’i Masina Maria ankoatra an’i Jesoa akory. (suite…)
Continuer la lecture Alahady 05/07/2015 : Toriteny
Tsy misy mpaminany tsy enin-kaja afa-tsy amin’ny taniny. (suite…)
Continuer la lecture Alahady 05/07/2015 : Tenin’ Andriamanitra